आतंक बनाम हार्ट अट्याक | एकलकेयर - स्वास्थ्य शिक्षा | अगस्ट 2021
स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि जानकारी, समाचार औषधि जानकारी कम्पनी कम्पनी, चेकआउट प्रेस स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समुदाय, कल्याण घरपालुवा जनावर कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कल्याण चेकआउट कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> आतंक बनाम हृदयघात
आतंक बनाम मुटुको आक्रमणको कारणहरू | Prevalence | लक्षण | निदान | उपचार | जोखिम कारक | रोकथाम | जब डाक्टरलाई भेट्ने | प्रायः सोधिने प्रश्नहरू |
मुटु व्यक्तिको शरीरको महत्त्वपूर्ण अंगहरू मध्ये एक हो। यसको जिम्मेवारीमा हाम्रो शरीरमा रगत पम्प गरेर अक्सिजन र पोषकतत्वहरू पुर्‍याउनु समावेश छ। यसप्रकार, मुटुमा शुरु भएको मुद्दा एकदम चिन्ताजनक हुन सक्छ। यद्यपि केहीआतंक आक्रमणको लक्षणरहृदयघातसमान छन्, दुई बीचको भिन्नतालाई थाहा पाएर तपाईंको जीवन बचाउन सक्छ।
TOआतंक हमलाअधिक चिन्ता हर्मोनको परिणाम हो जुन चिन्ताको चिन्ताको विषय बनेको छ। यसै बीच,हृदयघात(संग भ्रमित हुन छैनहृदयघात) तब हुन्छ जब aकोरोनरी धमनीअवरुद्ध हुन्छ। यसले हृदयको अपर्याप्त अक्सिजन प्राप्त गर्ने अंशमा पुर्‍याउँछ।
TOआतंक हमला(एक पनि भनेर चिनिन्छचिन्ता आक्रमण) अचानकले भएको हो ट्रिगर गर्दै शरीरको लडाई वा उडान संयन्त्रको र चिकित्सकीय रूपमा परिभाषित गरिएको छ तीव्र डर वा असुविधाको अचानक बृद्धि जुन केहि मिनेट पछि चरम तीव्रतामा पुग्छ। धेरै जसो समय, प्रतिक्रिया सबै आवश्यक छैन। हामी यसलाई झूटा अलार्मको रूपमा सोच्न सक्छौं। Aआतंक हमलाकुनै पनि समयमा हुन सक्छ। एक व्यक्ति टेलिभिजन हेर्दै बसिरहेको बेला पनि। गम्भिर डर र चिन्ताको अचानक भावना अक लागी अलमल्लमा पर्छहृदयघात।
चिन्ताले आक्रमण गर्दछबरु अप्रत्याशित छन्। तिनीहरू अनियमित मा लाग्न सक्छ। यदि तिनीहरू नियमित घटनाहरू हुन् भने हामी अब यसलाई दुर्लभ मामिलाको रूपमा हेर्दैनौं। व्यक्ति जो बारम्बार अनुभव गर्दछन्आतंक हमलाहुन सक्छआतंक विकार।
हो, यसको प्रमुख कारणआतंक हमलातनाव हो। यदि तपाईंले दैनिक तनावको महत्वपूर्ण मात्राको अनुभव गर्नुभयो भने, त्यसोभए तपाईं निश्चित रूपमा जोखिममा हुनुहुन्छ। नकरात्मक भावनाहरूले पनि तपाइँको अनुभवको अवसरलाई बृद्धि गर्दछआतंक हमला।
मुटुमा रगत प्रवाह रोक्नुको कारण के होहृदयघात। त्यहाँ धेरै सेक्सनहरू छन् जसमार्फतरगत बग्छमुटुमा यदि यी मध्ये कुनै एक खण्ड अवरुद्ध भयो भने, aहृदयघातएक वास्तविक संभावना हुन्छ।
त्यसकारण इस्केमिकमुटु रोग नम्बर एक को कारण होहृदयघात। यस रोगको परिणामस्वरूप भित्रको एक मोक्सी पदार्थको निर्माण हुन्छकोरोनरी धमनी। जब निर्माण महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यसले अक्सिजन युक्त रगतको प्रवाहलाई रोक्दछ जुन मुटुलाई आवाश्यक हुन्छ, जसको कारण एहृदयघात।
धमनीमा प्लाकको निर्माण बारे वर्णन गर्न अर्टेरियोस्क्लेरोसिस एक शब्द हो। जब भित्रबाट निर्माण भत्काउँछ भनेरक्तवहिनधमनी, हामी यसलाई रगतको थक्का भन्छौं। रगतको थक्कामा तपाईंको शरीरमा रगतको प्रवाह निषेध गर्ने सम्भाव्यता हुन्छ। योअवरोधसमयको साथ तपाईंको मुटुको स्वास्थ्यलाई कम गर्दछ, यसलेaलाई बढि संवेदनशील बनाउँदछहृदयघात।
को एक प्रमुख ऐंठनकोरोनरी धमनीयो अर्को कारण होहृदयघात। माथि उल्लेखित अन्य कारणहरू भन्दा यो कम सामान्य छ। गहन कस ब्लकहरूरगत प्रवाह। यस पटक, हामी spasms केही लामो समयसम्म कारणहरू जस्तै सिगरेट धूम्रपान, कोकेन इन्जेसन, वा गम्भीर भावनात्मक तनावमा पत्ता लगाउन सक्छौं।
आतंक बनाम मुटुको आक्रमणको कारणहरू
आतंक हमलाकारणहरू हृदयघातकारणहरू
शरीरको झगडा वा उडान प्रतिक्रिया ट्रिगर गर्दै
मा गम्भीर ऐंठनकोरोनरी धमनी
आतंक हमला, एक प्रचलितचिन्ता विकार, छन् धेरै बारम्बार भन्दाहृदयघात; यद्यपि उनीहरू कम छन्जीवनलाई जोखिममा पार्ने। बारेमा २.7% अमेरिकीहरू १ to देखि of 54 को उमेर बीचमा प pan्क डिसअर्डर हुन्छ, र सबै व्यक्तिहरूको एक तिहाई सम्म तिनीहरूको जीवनकालमा केहि क्षणमा आतंकको अनुभव हुन सक्छ।आतंक हमलापुरुष (१.6%) भन्दा बढी महिला (3..8%) लाई असर गर्छ। केहिलाई अचम्म लाग्न सक्ने कुरा के हो भने यी केसहरू मध्ये धेरैको उपचार नगरी रहन्छ।
समावेश संख्याहृदयघातधेरै विषयमा हुन सक्छ। Aहृदयघातगम्भीर छजीवनलाई जोखिममा पार्नेघटना यसैले, यो कसरी बारम्बार पत्ता लगाउन आश्चर्यजनक छहृदयघातसंयुक्त राज्य अमेरिका मा छन्।
हरेक Seconds० सेकेन्ड , संयुक्त राज्य मा एक व्यक्ति संग छहृदयघात। अधिक के हो, वार्षिक संख्याको कुल संख्याहृदयघातएउटा हो अचम्मलाग्दो 5०5,००० केस। यी प्रमाणहरू वास्तवमै भयighten्कर छन् किनकि उनीहरूले त्यो प्रमाणित गर्छन्हृदयघातधेरै सामान्य छन्।
आतंक बनाम हार्ट अटैक व्यापकता
आतंक हमलाव्यापकता हृदयघातव्यापकता
प्रति वर्ष २.7% वयस्कहरू
संयुक्त राज्यमा प्रत्येक seconds० सेकेन्डमा हुन्छ
5०5,००० वार्षिक मामलाहरू
हामीले सोच्दा दुई विशिष्ट तत्त्वहरू याद गर्नुपर्छआतंक हमला। पहिलो यो हो कि तिनीहरू कुनै पनि समयमा चेतावनी बिना नै देखा पर्न सक्छन्। को अचानक प्रकृतिआतंक हमलाखतरनाक हुन सक्छ। किचिन्ताले आक्रमण गर्दछबारम्बार वा बारम्बार देखा पर्दछ, कुनै बताईरहेको छैन कि कहिले हड्ताल आउँछ।
दोस्रो कुरा सम्झन यो त्यहाँ कुनै रोकिने छैन। एक पटक तिनीहरू सुरु भएपछि, एक मात्र उपाय भनेको यो पार नभएसम्म पर्खनु हो। को सामान्य संकेतआतंक हमलासमावेशसास फेर्न, तातो चमक, र जोखिमको भावना।
छातीको दुखाइनम्बर एक हो प्रीमप्टिभ साइन को एकहृदयघात, छाती दुखाइ भने सधैं हार्ट अट्याकमा हुँदैन। लामो समयसम्म रहिरहने कुनै पनि असुविधा ए को लक्षण होहृदयघात। तपाईले के खोज्न चाहानुहुन्छ त्यो दबाब, कडाई, वा होछाती असुविधा।
यो विशेष रूपमा छातीमा विस्तार हुँदैन। हतियार, काँध, जबडा, र घाँटी मा दबाव को भावना पनि हुन सक्छहृदयघातको लक्षण। अचानक थकान अर्को सूचक हो कि aहृदयघातभइरहेको छ।
आतंक आक्रमण बनाम हार्ट अटैक लक्षणहरू
आतंक हमलालक्षण हार्ट अटैक लक्षणहरू
आसन्न खतरा, घुटन, वा नियन्त्रण गुमाउने को भावना
टाउको दुख्ने, चक्कर आउने, वाहल्का टाउको
तापमानमा अचानक परिवर्तन, चिसो / तातो चमक
दौड मुटु धडधड
सुन्नता वा झुकाव
हल्लाउँदै वा काम्दै
काँध, जबडा, घाँटी, वा हतियारहरुमा दबाव र दुखाई
को निदानआतंक हमलात्यो सबै जटिल छैन। यो सामान्य होस्वास्थ्य सेवातपाईंको विगतको स्वास्थ्य र परिवारको ईतिहासको बारेमा जानकारी अनुरोध गर्न प्रदायकहरू। यसले तपाईंको जोखिममा छ वा छैन भनेर कडा सूचकहरूको रूपमा कार्य गर्दछ। र तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक द्वारा तपाइँका लक्षणहरूको आकलनले सटीक निदानको लागि अनुमति दिनेछ।
एक शारीरिक परीक्षण पनि अत्यधिक खुलासा हुन सक्छ एक डाक्टर तपाईंको मोनिटर गर्दछ रूपमाधडकनकाे गतिर ताल। अन्तमा, तपाईको रक्तचाप जाँच्नाले चिन्तालाई संकेत गर्न सक्छ उच्च र तनाव रआतंक हमला।
तपाइँकोस्वास्थ्य सेवाप्रदायक वाहृदय रोग विशेषज्ञनिश्चित रूपमा योगदान गर्न सक्ने कारकहरूको लागि नजर राख्दछहृदयघात। थप रूपमा, चिकित्सा ईतिहास र रेकर्डहरू तपाईंको हृदयघातको खतराको सशक्त सूचक हुन सक्छ। परिक्षण परिणामहरू जोखिम वा भर्खरको प्रमाण निर्धारण गर्न पनि महत्वपूर्ण छन्हृदयघात।
हृदयको स्वास्थ्य ट्र्याक गर्न एक तरिका होइलेक्ट्रोकार्डियोग्रामपरीक्षण (EKG वा ECG)। यो परीक्षणले तपाइँको मुटुको स्वास्थ्य निर्धारण गर्दछ ताल विद्युतीय संकेतहरूको प्रयोग मार्फत।
रक्त परीक्षण पनि एक आगमन को संकेत हो भने संकेत गर्न सक्छहृदयघात। जब तपाईको मुटुका कोषहरू मर्दछन्, तिनीहरूले प्रोटिनहरू निकाल्छन्। एक साधारण रगत परीक्षणले संकेत गर्दछ यदि त्यहाँ यी विशेष प्रोटीनहरूको अधिक मात्रा छ भने। गम्भीर अवस्थाहरूमा, छातीको एक्स-रे, र एन्जीग्रामले तपाइँको मुटुको अवस्थाको बारेमा प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान गर्न सक्छ।
आतंक आक्रमण बनाम हार्ट अटैक निदान
आतंक हमलानिदान हृदयघातनिदान
आतंक हमलाप्राय: प्रशासित गरेर उपचार गरिन्छ चिन्ता औषधोपचार जस्तै लेक्साप्रो , प्रोजाक , र Xanax । यद्यपि औषधि सहयोगीको रूपमा प्रमाणित छ, सबैभन्दा प्रभावकारी विधि भनेको औषधि र संज्ञानात्मक-व्यवहार उपचार। यी दुई कारक मा प्रभावकारी तनाव कम र एक को संभावना सीमित गर्न सक्छन्आतंक हमला।
चाँडै अभिनय एक को प्रभाव लाई कम गर्न को कुञ्जी होहृदयघात। Appear १११ लाई कलिंग हुन सक्ने बित्तिकै लक्षणहरू देखा पर्न सक्छन् जीवन बचाउने कार्य। स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई फोनबाट तुरुन्तै उपचार सुरु गर्नु सामान्य कुरा हो। तिनीहरूले सम्भवतः एस्पिरिनलाई सिफारिश गर्छन् थप रगतको थक्काबाट क्षति सीमित गर्न। जब प्यारामेडिकहरू आइपुग्छन्, तिनीहरू पुन: स्थापना गर्ने प्रयास गर्नेछन्रगत प्रवाहतपाईंको धमनी बाट तपाईंको मुटुमा। चिकित्सा विशेषज्ञहरूले क्लट बस्टिंग औषधि पनि प्रदान गर्नेछन्। भविष्यमा हुने घटनाहरू रोक्नको लागि जीवनशैली परिवर्तनका साथै स्वास्थ्य सुधारको लागि अस्पतालमा बस्नु आवश्यक पर्दछ।
आतंक आक्रमण बनाम हार्ट अटैक उपचार
आतंक हमलाउपचार हृदयघातउपचार
व्यक्तिगत तनाव व्यवस्थापन
11 ११ लाई कल गर्नुहोस्
बाइपास गर्न चिकित्सा प्रक्रियाअवरोध
तथ्या .्कले त्यो देखाउँदछआतंक हमलापुरुष भन्दा बढी महिलालाई असर गर्छन। जे होस्, उमेर पनि समीकरण मा कारक। सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त उमेर समूहहरू प्रारम्भिक वयस्कको दायरा देखि किशोरहरू हुन्। यस उमेर समूहले अक्सर कमजोर तनाव व्यवस्थापन अनुभव गर्दछ।
जो परम्परागत रूपमा अस्वास्थ्यकर जीवनशैली बिताउँछन् उनीहरूलाई अनुभव गर्ने बढी जोखिम हुन्छहृदयघात। पारिवारिक इतिहास पनि एक भूमिका खेल्छ। यदिमुटु रोगपरिवारमा दौडन्छ, तपाईं एक को अधिक जोखिममा हुन सक्छहृदयघात।
उमेर पनि एक कारक हो वृद्ध मानिसहरुसँग उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप)। अनिवार्य रूपमा, रक्तचाप र रगत कोलेस्ट्रॉलमा परिवर्तन गर्ने कुनै पनि कारकले तपाईंको मुटुमा असर गर्न सक्छ। धूम्रपान गर्नेहरूले ठूलो जोखिम पनि चलाउँछन्।
आतंक बनाम हार्ट अटैक जोखिम कारक
आतंक हमला जोखिम कारक हृदयघात जोखिम कारक
किशोरावस्था मा चाँडो वयस्कता
दुरुपयोग र दर्दनाक घटनाहरूको इतिहास
प्रमुख जीवन परिवर्तन हुन्छ
खराब जीवनशैली जुन मोटोपना निम्त्याउँछ
रोकथाम उपायहरू थोरै र धेरै बीचमा छन्। धेरै जसको अनुभव छचिन्ताले आक्रमण गर्दछमुद्दालाई अनचेक हुन अनुमति दिनुहोस्, सकेसम्म चाँडो उपचार पाउँदा यसको फ्रिक्वेन्सी सीमित गर्न मद्दत गर्दछआतंक हमला। एक डाक्टर एक उपचार योजना को विकास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए, यो योजना कायम गर्न तपाईको भर पर्दछ। अन्तमा, शारीरिक गतिविधि सामान्य रूपमा चिन्ता कम गर्न मद्दतको लागि प्रमाणित भएको छ।
धेरै रोकथाम उपायहरू को संभावना सीमित बारेमाहृदयघातसम्भव भएसम्म तपाईको मुटुलाई स्वस्थ राख्न वरिपरि घुम्नुहोस्। यसमा खाना र व्यायाम साथै धूम्रपान जस्ता हानिकारक बानीहरू छोड्ने सामिल छन्। थप रूपमा, आवश्यक परेमा उच्च रक्तचाप र उच्च कोलेस्ट्रोल व्यवस्थापन गर्न औषधीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ।
आतंक आक्रमण बनाम हार्ट अटैक रोकथाम
आतंक हमलारोकथाम हृदयघातरोकथाम
मुद्दालाई वेवास्ता नगर्नुहोस्
उपचार योजनामा ​​अडिग रहनुहोस्
प्रभावकारी तनाव व्यवस्थापन गर्नुहोस्
स्वस्थ खाना खानुहोस्
पर्याप्त निद्रा पाउनुहोस्
जब एक को लागी एक डाक्टर को लागीआतंक हमलावाहृदयघात
पहिले नै उल्लेख गरिएझैं प्राय जसो व्यक्तिहरू बारम्बार अनुभव गर्छन्आतंक हमलातिनीहरूलाई अनचेक गर्न जारी राख्न अनुमति दिनुहोस्। खोजी गर्दैचिकित्सा सहयोगको आवृत्ति प्रभावकारी कम गर्न सक्नुहुन्छआतंक हमला। चिकित्सा सहायता अनुरोध गर्न सँधै सिफारिस गरिन्छ।
के म एलेभ र इबुप्रोफेन सँगै लिन सक्छु?
किनभनेहृदयघातरआतंक हमलाकेहि सामान्य लक्षणहरू साझेदारी गर्नुहोस्, यसलाई खोज्न सधै सिफारिस गरिन्छतत्काल चिकित्सा ध्यान, 11 १११ मा कल गर्नुहोस्वा जानुहोस्आकस्मिक कक्षयदि तपाईंले छातीमा तीव्र कडाई अनुभव गर्नुभयो भने।हृदयघातहुन सक्छजीवनलाई जोखिममा पार्ने; यसैले, पीडा समाप्त हुनको लागि पर्खनु सिफारिश गरिएको विकल्प होईन।
यसका बारे बारम्बार सोधिने प्रश्नहरूआतंक हमलारहृदयघात
कसरी तपाईं फरक गर्न सक्नुहुन्छआतंक हमलाबाटहृदयघात?
A लाई अलग गर्ने कारकआतंक हमलार एहृदयघातपीडा उठ्ने परिस्थितिमा हो। यो अधिक सामान्य होहृदयघातहुनसक्छ जब तपाईं शारीरिक श्रमको सामना गर्दै हुनुहुन्छ। यसको विपरितमा,आतंक हमलाआराम वातावरणमा अधिक बार देखा पर्छ।
हृदय चिन्ता के हो?
हृदय चिन्ता मानसिकता को एक मुद्दा हो। निरन्तर चिन्तामुटु स्वास्थ्यहृदय चिन्तित हुन सक्छ। यो शातिर सर्कल हो कि कसैलाई संसूचक स्थितिमा फँसाउँछ। जब हृदयको स्वास्थ्यको बारेमा लगातार चिन्ता गर्दै, व्यक्तिले हृदयलाई अनावश्यक तनावमा राख्छ।
तपाईं एक गर्न सक्नुहुन्छ?हृदयघातचिन्ताको कारण?
जबकि चिन्ता सीधा एक मा परिणाम हुन सक्दैनहृदयघात, दीर्घकालीन चिन्ताले मुटुलाई कमजोर पार्न सक्दछ जहाँ यो अधिक संवेदनशील हुन्छहृदयघात। लगातार तनावले तपाईंको मुटुको शक्तिलाई कमजोर बनाउन सक्छ। यसैले चिन्ताको एक दीर्घकालीन सम्बन्ध छहृदयघातत्यसैले यो सिक्न महत्त्वपूर्ण छचेतावनी संकेतशरीर मा र मामानसिक स्वास्थ्य, र व्याकुल हुनु भन्दा पहिले पेशेवरको खोजी लिन तपाईको स्वास्थ्यमा नकारात्मक दीर्घकालीन टोल लिन सक्छ रकल्याण।
सक्छआतंक हमलातिम्रो मुटुलाई हानी गर्छौ?
फेरि, प्रभाव तत्काल र प्रत्यक्ष छैनन्; जहाँसम्म, बारम्बार अनुभव गर्नेहरूका लागि हृदयसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन परिणामहरू छन्आतंक हमला। अध्ययनहरू प्रमाणित भएका छन् ती जसले अनुभव गर्छन्आतंक हमलाबारम्बार अनुभव गर्ने ठूलो सम्भावना हुन्छहृदयघातपछि जीवनमा जो अनुभव गर्दैनन्चिन्ताले आक्रमण गर्दछ।
एक्ने उपचारको लागि उत्तम जन्म नियन्त्रण गोली
के यदि म टेमीफ्लु लिन्छु र फ्लु न गर्दछ
तपाईं आफ्नो २०s मा ल्याक्टोज असहिष्णुता विकास गर्न सक्नुहुन्छ
घरमा योनी खमीर संक्रमणको उपचार कसरी गर्ने
प्रकार एक र बी फ्लू बीच भिन्नता
अब सकारात्मक रक्त प्रकारको के अर्थ हो
के यो दैनिक अफ्रिन प्रयोग गर्न खराब छ?